सरकार र कांग्रेसबारे विप्लव माओवादी के सोच्दैछ ?
अनिल शर्मा विरही दोब्बर नेकपाको दोस्रो वरियताका अध्यक्ष प्रचण्डले अघिल्लो साता नेपालगञ्जको एक कार्यक्रममा यस अघिभन्दा बुझिने भाषामा आफू छिट्टै प्रधानमन्त्री हुने खुलासा गरेका छन् । अर्को चुनावपछि प्रम हुने अर्थमा नभएर आधा–आधा सहमतिको कारण छिट्टै प्रम हुन्छु भनेको होला । अर्कोतिर ओलीपक्ष त्यसप्रकारको कुनै सहमति नभएको र ओलीलाई ५ वर्ष नेतृत्व गर्ने मतादेश प्राप्त भएको बताइरहेको छ । कांग्रेस, समाजवादी फोरम, राजपाको सरकारविरोधी मोर्चा… विस्तृत समाचार
धन गयो, पीर नमान्नू, इज्जतलाई मामुली नठान्नू
संकेत कोइराला एकपटक मन्दिरको बलेंसीमा रहेको ढुंगाले मन्दिरभित्र स्थापित ढुंगाको मूर्तिलाई सोधेछ– ‘साथी, तिमी पहाडबाटै झरेको, म पनि पहाडबाटै झरेको, तिमी ढुंगा, म पनि ढुंगा तैपनि मान्छे तिमीलाई रातोदिन पूजा गर्छन्, पूmलप्रसाद चढाएर ढोग्छन् । तर, मभित्र के त्यस्तो दोष छ र, हरपल फोहोर खुट्टाको प्रहार खेप्नुपर्छ ?’ ढुंगो मन्द मुस्काउँदै जवाफ दिन्छ– ‘हो साथी, हाम्रो जात एउटै, थातथलो एउटै हुँदाहुँदा छिनो बजारिँदा भोगिएको पीडा… विस्तृत समाचार
​प्रधानमन्त्रीज्यू, ‘पाण्डोरा बक्स’ खोलम्
श्याम रिमाल ‘माछी मार्न जाऊँ न दाजै कालापानीमा छेकी बारी दुवाली महाकालीमा’ (विजय श्रेष्ठ, विधान श्रेष्ठ) भारतीय नक्सामा नेपाली भूमि देखिएपछि परराष्ट्र सम्बन्धित उथलपुथलकारी घटना निम्तिएको छ । यसले अब भारतसँगको सीमा विवाद पूर्णरूपमा सल्टाउने परिस्थिति पनि देखिएको छ । यसरी सीमा समस्या हल गर्न दुवै देशलाई एउटा अर्काे प्रस्थानविन्दु मिलेको छ । परराष्ट्रनीतिमा नेपाल बोल्न र सुनिन थालेको कुरा सत्य हो÷होइन, यो प्रमाणित गर्ने… विस्तृत समाचार
कहिलेसम्म आशयकरणी सहेर बस्ने ?
सभामुख आफ्नै कार्यालयकी कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास आरोप खेपिरहेका छन् । चोक, चौताराजस्तै म कार्यरत एउटा कार्यालयभित्र पनि घरी घरी सभामुख प्रकरणको बहसले राम्रै स्थान पाउँथ्यो । असोज १४ गते, सबै काममा व्यस्त थियौँ । केही दिन पुराना समाचार पल्टाउँदै गर्दा एउटा भेटियो असोज १० गतेको । ‘हनिट्रयाप’ मा पारेर ठगी गरेको भन्दै महिला पक्राउ परेको विषय । हनिट्रयापको यकिन अर्थ नबुझेपछि सहकर्मीमाझ जिज्ञाशा राखें ।… विस्तृत समाचार
तलको चिन्ता, भित्रको चेतावनी
विदुर खड्का पार्टी एकताको डेढ वर्षमा धेरैजसो संगठनका आधीसरो एकताको काम सकिएको छ । केन्द्रीय समिति बनेको छ, नौ सदस्यीय सचिवालय बनेको छ, विधानमै नभएको उपाध्यक्ष पनि बनाइएको छ तर पोलिटब्युरोको पत्तो छैन । केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यक्षेत्र तथा क्षेत्राधिकार तोकिएको छैन । विभाग बनेका छन्, संयोजक÷सहसंयोजक पनि तोकिएका छन् तर सदस्य चुनिएका छैनन् । केन्द्रीय निर्वाचन, अनुशासन र लेखा आयोगका संयोजक र सदस्य रिक्त छ… विस्तृत समाचार
विदेश बस्ने सबै हुल्याहा हुँदैनन् हजुर
रमण पनेरु एनआरएनए र तिनका चुनावबारे लेख्न उति मन थिएन । एनआरएनएको छवि नेपाल मात्र नभई विदेशमा पनि त्यति सङ्लो छैन । नेपाल बस्नेले प्रवासी नेपाली भन्नेबित्तिकै युरो र डलर सोचे पनि प्रवासमै बसेकालाई एकअर्काको हैसियत राम्रै थाहा हुन्छ । त्यसैले प्रवासमै रहेकाहरूमध्ये एनआरएनए भन्नेबित्तिकै उही देशको फोहोरी राजनीतिको अडबांगो नक्कल बुझ्नेहरूको कमी छैन । देशको व्यवस्था देखेर आजित भएका र अवसरको खोजीमा विदेश पसेकाहरूलाई… विस्तृत समाचार
जसले नातेदारकै भकारी फोरे
राजकुमार दिक्पाल एउटा सानो होटल थियो । चिया चमेना हुने, मिठाई लड्डु पनि पाइने । क्षेत्रीयस्तरको शिक्षा निर्देशनालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय र लोकसेवा आयोगको सम्मुख रहेको यो होटलमा सरकारी कर्मचारीको चियाचमेना र खानाका लागि राम्रो जमघट हुन्थ्यो । होटल सञ्चालकका एक जना छोरा साह्रै खरा । संयोग, भर्खरै बहुदल आउनु अनि आफंैमा सानै उमेरदेखि वामपन्थ चढ्नु । यता आफू पनि बाल्यकालदेखि नै तिनै पन्थ… विस्तृत समाचार
​अन्तर्घातलाई कामरेडी आमन्त्रण
पुुष्पलाल पाण्डे दमक उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन उद्योग वाणिज्य संघ र टे«किङ एजेन्ट एसोसिएसनको मत परिणामसँगै नेकपाभित्र अन्तर्घातको छायाँ छर्लंग भएको छ । ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनका बेला मेरो पुस्ताले अन्तर्घात शब्द पहिलो पटक सुनेको हो । त्यसताका छत्तिसे र चौहत्तरेमा विभक्त भएर एकले अर्को समूहलाई जसरी पनि हराउने गरी लागेकै कारण कांग्रेसले आफ्नो बहुमत मात्रै गुमाएन, संसद्मा दोस्रो ठूलो दल बन्न बाध्य भयो । … विस्तृत समाचार
​आफ्नै कारण संकट नआओस्
विदुर खड्का संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि बनेको संविधान पाँच वर्षको भएको छ । संविधानअनुसार बनेको सरकारले २० महिना पार गर्दै छ । संघीय संरचनाअनुसार राज्यको पुनःसंरचना गरिएको छ । जंगबहादुरले १९१० सालमा बनाएको मुलुकी ऐनलाई देवानी तथा फौजदारी संहिता तथा कार्यविधिले विस्थापित गरेको छ । सात वटा प्रदेशको सिमाना बनेको छ, अझै न्वारान भइसकेको छैन । प्रदेश सरकार र यसको संरचना निर्माण भएको छ… विस्तृत समाचार
आफ्नै अनुहार हेर्न ऐना किन्ने कि ?
तीर्थ सिग्देल अब पनि कुनै प्रणालीका लागि आन्दोलित हुनुपर्ने छ र ? अहिलेको संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको पनि विकल्प छ ? के अहिले नै यो अवस्थामा नेपालमा समाजवाद आउला ? सडकमा उर्लेका कतिपय आवाजले भनेजस्तो अधिनायकवादको स्थिति हो अहिले ? ठीक यहीबेला कांग्रेस एउटा अभियान– हिमाल, मधेस, पहाड, तराई अर्थात् हिमपत अभियानमा छ । यस्ता अभियानले राजनीतिक प्रणालीमा देखिएका खराबीको पहिचान गर्न मद्दत गर्छ… विस्तृत समाचार